Madaxweyne Waare oo si rasmi ah u furay Kalfadhiga 5aad ee Baarlamaanka Hirshabelle – Radio Daljir
Janaayo 24, 2019 2:49 g 0
Madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare ayaa manta si rasmi ah u furay Waxaa kalfadhiga 5aad ee Barlamaanka Dowlad gobaleedka Hirshabeele.
Munaasabada furitaanka kalfadhiga 5 aad ee Barlamaanka waxaa kasoo qeybgalay madaxda ugu sareysa maamulka Hirshabeele, sida Maxaxweynaha dowlad gobaleedka Hirshabeele, Maxamed Cabdi Waare, Ku xigeenka Hirshabelle Cali Cabdullahi Xuseen, Wasiirka Arrimaha Gudaha Hirshabeele, Maxamed cali Caadle iyo marti sharaf kale.
Guddoomiyaha Baarlamaanka Hirshabeele Cismaan Bare Maxamed oo ugu horeyn goobta ka hadlay ayaa ka warbixiyay waxyaabihii u qabsoomay afartii kalfadhi hore ee Barlamaanka Hirshabelle uu furnaa.
Dhinaca kale Madaxweyne kuxigeenka Hirshabeele Cali guulaawe Xuseen ayaa sheegay mudada uu dhisan yahay maamulka Hirshabeele in xildhibaanada dhabar adeeg kusoo shaqeeyeen.
Ugu dambeyn Madaxweynaha Hirshabeele Maxamed Cabdi waare ayaa sheegay inta uu furan yahay kaldhiga 5aad ee barlamaanka in ay deegaanada Hirshabeele ka qabsoomi doonaan ilaa 16 mashriic
Gabagabada munaasabada ayaa lagu dhaariyay Golaha Wasiirada cusub ee xukuumada Hirshabeele ka dib markii uu maalin ka hor madaxweynaha Hirshabeele, isku shaandeyn uu ku sameeyay sidoo kale waxaa goobta lagu dhaariyay xildhibaan ku cusub Baarlamaanka Hirshabeele kaas oo bedeley xildhibaan Cabweli maxamed Ibraahim oo ku geeriyooday qarax loogu xiray gaarigiisa.
Faahfaahin: Maxkamadda Darajadda 1-aad ee Gobalka Bari oo Xukuno riday (Daawo)